Muqdisho: Horumar aysan weli gaarin dalal badan, oo shaaca laga qaaday | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Glocall Telecoms ayaa qorsheeynaysa in ay bixiso internetka xawaaraha sarreeya ee 4G LTE oo ku xiran taleefannada moobiilka kaas oo la siinayo dadka reer Muqdisho, xafiisyada dawladda, dugsiyada iyo ganacsiga, sidaana waxaa ku dhawaaqay shirkadda fulineeysa ee Tazca Connects.
“Keenidda 4G LTE ee aan la sameeynayo Tazca Connects ayaa dadajin doonta sida ay Soomaaliya ugu xirmayso caalamka waxayna fursad cusub u noqon doontaa koboca dhaqaalaha bulshada iyada oo kor u qaadi doonta helitaanka xogta iyo adeegyo macne leh,” madaxa sare ee maamulka Glocall Telecoms, Mobeen Bhamjee ayaa ku sheegay hadal uu soo saaray.
Tazca Connects ayaa isticmaali doonta barnaamij software oo ay sameeysay shirkadda Lemko Corporation kaasoo internetka 4G LTE gaarsiin doonta ganacsatada iyo bulshooyinka ku sugan Muqdisho.
“Shuraakaddeenna aan la wadno Soomaaliya waxa ay muujinaysaa in software awood leh, oo lagu jamciyay aragti awood leh, ay dadka ku xiri karto meel walba oo Dhulka ah iyada oo ugu kaceeysa qiime istaahila oo uu bixinayo adeegga LTE,” ayuu yiri Michael, madaxweyne ku-xigeenka suuq-geeynta ee Tazca Connects.
“Waxan ku faraxsannahay in aan annaga iyo Tazca bixinno sawir ah, in faa’iidooyinka dhaqaale iyo bulsho ee ballaarinta helitaanka internetka uu bulshada u noqon karo xaqiiq ay jeeb ahaan awoodi karaan.”
Ku dhawaaqiddan ayaa imaanaysa xilli ay al-Shabaab internetka laga isticmaalo mobiilka ka mamnuucday dhammaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, oo ay ku jirto Muqdisho.
Glocall Telecoms iyo Tazca Connects labaduba waa shirkado isgaarsiin oo fadhigoodu yahay Maraykanka kuwaa oo diiradda saara Afrika iyo goobaha aan adeegyada ku filan helin.